Umahluko phakathi kwe-ubersexual kunye ne-metrosexual: yintoni nganye? | Amadoda aQinisekileyo
Kukho amadoda athanda ukuziva ulungile ngaphakathi nangaphandle. Amadoda azinyamekelayo azibekela iindlela kwaye ke Yenza ubuhle ukuba woyise zonke izini. Indoda e-ubersexual ngumntu okhathalela umfanekiso wakhe, owenza indlela yokuphila kunye nomlinganiswa. Indoda ye-metrosexual ngumntu onakekela umfanekiso wakhe, kodwa ngokugqithiseleyo.
Sithanda ukubona ezi ndlela zimbini zamadoda, kodwa kunye yesini, ijongeka ingonwabanga, kodwa inyanyekelwa kakuhle. Kweli candelo sityekele kwabo banonophela kakhulu imizimba yabo kwaye bakhathalele ngaphezulu kakhulu kunokubonakala nje.
1 Ubungqingili besini ngaphezulu kwe-metrosexual
2 Inyathelo elibalulekileyo ukusuka kwi-metrosexual ukuya kwi-ubersexual
3 Uqhubeka njani lo mkhwa?
Ubungqingili besini ngaphezulu kwe-metrosexual
I-ubersexual iyagqitha kwi-metrosexual, ubuncinci yile ndlela uninzi lwabafazi abalukhetha ngayo. Umntu onale meko udlulisela ukuzithemba kuye kwaye uphawula isitayile sakhe. Uthanda ukwenza ngathi uyazikhathalela, kodwa engazibaxi izinto. Nxiba ngokukhuselekileyo, ngaphandle kokutshintsha, kwaye kwiimeko ezininzi kwifayile ye- Enhle, nangona ikwakhona.
Indoda e-ubersexual iyazikhathalela ngokwasemzimbeni kwaye iyayenza imidlalo, nangona engathandi ukumakisha izihlunu zakhe kakhulu. Uthanda ukukhathalela umfanekiso wakhe ngocoselelo. Indoda ye-metrosexual Uyawuthambisa umzimba wakhe, asebenzise iikhrim ukukhathalela ulusu kunye nokwenza i-manicure, konke oku kubandakanya oko Ukubonakala kwendoda eyiNarcissistic yobuhle.
I-ubersexual iyathanda ukuzikhathalela, kodwa ngaphandle kokutsala umdla omkhulu, Bangamadoda azithembayo kwaye yiyo loo nto bengakuthandi ukwenza ngathi yonke into ibaxiwe. Unokuba nomdla wokwazi ukuba elinye lala magama mabini abanotyekelo lwesini, kuba banokuba ngabantu abathandanayo, abathandana besini esinye okanye abesini esahlukileyo.
Inyathelo elibalulekileyo ukusuka kwi-metrosexual ukuya kwi-ubersexual
Sithetha ngendoda e-ubersexual eyazikhathaleleyo kodwa ngubani Iyamkhathaza imihombiso egqithileyo kunye nokuphinda uthinte kwakhona phambi kwe-metrosexual. Kodwa kuba ukhulisa intshebe yeentsuku ezintathu ayifani nokutyeba, kodwa endaweni yokunika umfanekiso ofundwe kakuhle.
Ukhathalele kakhulu ucoceko, ukhathalela impilo yakhe, ukuba ligorha kwaye esazi ukuba akanakuphulukana nobudoda bakhe, yiyo loo nto ethandwa kakhulu ngamadoda nabafazi. Phantsi kwehlazo lakhe njenge-ubersexual, amagama akhe achazwa njenge 'über' ephezulu "nangaphezulu" kunye "nokwabelana ngesondo" njengengcinga "yesini". Ngamanye amagama, ukuba sidibanisa yonke into, sidibana nenkcazo "superman."
I-Metrosexual iyafana nendoda eyila umfanekiso wayo ukuze yoyise yonke into ezimisele ukuyenza. Inkathalo yabo ithatha ingqalelo enkulu, kodwa ngamadoda athanda ukuyenza kuba baziva bonwabile ngesiqu sabo. Abanye bade bakhethe ukuqhubela phambili kwaye sele kufuneka babhenele kuqhaqho.
Ngakumbi nangakumbi amadoda athatha isigqibo sokuzikhathalela kwaye enze ukuba ivele inkxalabo yakho ngenkangeleko entle. I-metrosexual ifezekisa impumelelo ekuboneni kokuqala kwaye i-ubersexual ihlala ingacacanga ngenxa yemeko yokuba liliso elibukhali, kodwa ngaphandle kokugxininisa iinkcukacha zakhe.
Nangona sinokufumana amadoda aqala ngokunxiba kwifashoni, baya kudibana neenwele zabo ezilungiswe kakuhle kwaye abanye baphinde baziphathe ngomzimba. Imidlalo nayo iyancedisa engenakuphoswa kwaye ezinye njengenye indlela yokugqibela bakhetha ukubhenela kwi-scalpel. Kukho amadoda amaninzi awonelisekanga kukuma kwawo kwaye ngakumbi isisu sawo. Kwiminyaka yakutshanje, ibango lokhathalelo oluthile lonyukile, kubandakanya ukuchukumisa ubuso kunye ne-liposuction.
Eyona nkxalabo yakho inkulu Kuzo zombini iimeko inomdla ukusuka kwi-40 yobudalaOloyiko lwabo olukhulu kukushiya ubutsha babo kwaye baqala ngokufuna ukuba nomzimba ongcono, ngaphandle kokufuna ukukhuthaza impilo yabo. Malunga nokulandela iphethini yefashoni, i 'uber' iyahambelana nefashonikodwa 'i-metro' ngumthengi omkhulu, Iya kuhlala iyinjongo yakho, ukuziva ukhuseleke ngakumbi.
Kwihlabathi labantu abadumileyo sifumana amadoda amaninzi anolu hlobo lomkhwa. Baninzi abantu abadumileyo abanike ukubonakala kwindawo yabo yentengiso kwaye mhlawumbi zezo ntengiso ndiyilele le stereotype yendoda yokuhlangana ngesondo.
Ngaphandle kokuya kude kakhulu sinako UDavid Beckham oqale ukunika lo mfanekiso wendoda ebukekayo, iimbaleki kwaye ihlala inempahla yakutshanje kunye neenwele. Ngexesha langoku sinokufumana Cristiano Ronaldo ngenkangeleko ebandayo yendoda ye-metrosexual, apho ilandelwa ngamadoda afana noGeorge Clooney okanye uLuis Rollán.
Kwaye ayisiyi-umbersexual kuphela okanye i-metrosexual men eye yamangalisa abafazi abaninzi, abanye bakhetha amadoda abukhali kakhulu, eneempawu ezinxaxhileyo yokuba yindoda eqhelekileyo ekhathalele kuphela into eyiyo, ngokudakumba. Sithetha ngayo 'ukubuyela emva' Olunye uhlobo lwendlela ephawule isitayile sakhe kumadoda aziwa njengoSean Pean, Jarvier Bardem okanye uRusell Crowe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Umahluko phakathi kwe-ubersexual kunye ne-metrosexual: yintoni nganye?